कांग्रेसले कमण्डलु लिएर उपसभामुख पद माग्दैनः रिजाल - हिमाल दैनिक
१२ माघ २०७६, आईतवार १७:५९
प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको बार्गेनिङ गरेर सभामुख पदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवादस्पद नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको विरुद्धमा उम्मेवारी नदिएको भन्ने आरोपप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले दह्रो प्रतिबाद गरेका छन्।
सभामुख चयनका लागि आइतबार प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचन पूर्व संसदमा बोल्दै नेता रिजालले आफ्नो दल देशमा दिगो शान्ति र संविधानले अंगिकार गरेको लोकतन्त्रिक शासन पद्धतीप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे।
संविधानले सभामुख र उपसभामुख अलग अलग दलको हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षले त्यसको मर्म आत्मसाथ गर्ने वा नगर्ने उसैको जिम्मा भएको बताउँदै उनले आफ्नो दल उपसभामु पदका लागि बार्गेनिङ गरेर सभामुखको उम्मेदवारी नदिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरे।
उनले भने, ‘कांग्रेस कमण्डलु लिएर उपसभामुख माग्न संसदमा प्रस्तुत हुने छैन। त्यसैले म यो कुरालाई पनि प्रष्टरुपमा भन्न चाहन्छु, हामीसँग मत पनि छैन, हामी कमण्डलु लिएर आएका पनि छैनौँ उपसभामुख पदका लागि। यो प्रष्ट होस्।’ प्रस्तुत छ, कांग्रेस नेता मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गरेको विचारः
आज हामी सभामुख चयनका लागि जम्मा भएका छौँ। यस क्रममा मैले हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको निर्णय संसदलाई जानकारी गराउनु प्रमुख कर्तव्य ठान्दछु।
म यसलाई जस्ताको तस्तै पढ्न चाहन्छु। सभामुख निर्वाचित गर्न यथेष्ठ मत रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदको आसन्न निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार प्रस्तुत गरिसकेको र सभामुख आफैँमा तटस्थ रहनु पर्ने पद भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दल आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्दछ।
हाम्रो निर्णय त्यतिमात्रै हो। यो निर्णयमा लेखिएको कुराभन्दा घटी पनि होइन र बढी पनि होइन। बाहिर व्याख्या, विश्लेषण घटी, बढी सबै किसिमले भयो।
यसैले हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो निर्णय जस्ताको तस्तै गरिमामय संसदलाई सम्माननीय सभामुखमार्फत भन्नु आवश्यक थियो।
अर्को एउटा यसैसँग जोडेर चर्चा चलेको छ, कि कांग्रेसले उपसभामुख पदका लागि बार्गेनिङ गरेर सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएन। एउटा कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु, संविधानमा सभामुख र उपसभामुख अलग अलग पार्टीको हुनु पर्छ भन्ने कुरा लेख्दाखेरी कतैबाट खोजेर कुन कुन पार्टी छन्, कताबाट दिँदा सत्तालाई सजिलो पर्ला भनेर उपसभामुख खोज्ने आशय र मनसायका साथ यो प्रावधान लेखिएको होइन।
संविधानमा अलग अलग पार्टीको हुनुपर्छ भनेर लेख्दा स्वाभाविक रुपले त्यसले एउटा मर्म र भाव प्रस्तुत गरेको छ। त्यो मर्म र भाव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बुझ्ला, नबुझ्ला, बुझेर बुझ पचाउला, नपचाउला त्यो हाम्रो सरोकारको विषय भएन।
कांग्रेस कमण्डलु लिएर उपसभामुख माग्न संसदमा प्रस्तुत हुने छैन। त्यसैले म यो कुरालाई पनि प्रष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु, हामीसँग मत पनि छैन, हामी कमण्डलु लिएर आएका पनि छैनौँ उपसभामुख पदका लागि। यो प्रष्ट होस्।
अब योसँग जोडिएको अर्को विषयः अलि दिनपछि त हामी एउटै पार्टी हुन्छौँ, आज दुइटै छौँ, त्यसैले प्राविधिक रुपले हामी एउटै पार्टी हुन आँटेका र सम्झौता गरिसकेकाले दुइटै पद लिएपनि हुन्छ भन्ने व्याख्या लामो समयसम्म यहाँ रह्यो।
त्यो परिस्थिति छैन। फेरिनु पर्छ, एउटै पार्टीको हुनु हुँदैन भनि हामीले भन्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजियो भनेजस्तै गरियो। अदालतमा भएको मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्ने हामीसँग के संख्या छ र? अदालतमा रहेको मुद्दालाई प्रभावित गर्न सक्नेहरुले कसरी प्रभावित गर्छन् त्यो बेला बेलामा भन्ने गरेकै छन्। मैले आम नेपाली जनतालाई सम्झाइराख्नु पर्दैन।
तर, एउटा कुरा पक्का हो, हिँजो गलत काम भएको थियो। गलत काम भएको हुनााले लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष के छ भन्दा गलत कामबाट निस्किने बेलामा पनि लोकतन्त्रले आफ्नो पद्धती र प्रक्रिया समात्दा सभामुख निर्वाचन गर्ने काम पुस ४ देखि आज माघ १२ सम्म आइपुग्यो।
त्यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई केही शिक्षा भएको छ वा छैन, नेकपाले जान्ने विषय हो। हामीलाई चाँही एउटा शिक्षा भएको छ, कि गलत प्रवेश गरेको विषय पनि लोकतान्त्रिक पद्धतीमा जर्निङ हुँदा हुँदा बाहिर निस्किँदा आम देशभरी एउटा मत बलियोसँग भएको छ। व्यक्तिका बारेमा हाम्रो मत छैन, थिएन।
हिँजो कुनै व्यक्तिका बारेमा चर्चा भएको विषयमा आज एफ्टर दि फ्याक्ट पक्ष लिन वा विपक्षमा बोल्न चाहँदैनौँ। तर, नेपाली राजनीति, नेपाली समाजमा महिला शशक्तिकरणको आवाज अत्यन्त बलियो छ, महत्वपूर्ण छ। यसलाई कुनामा पन्छाएर राख्न पाइँदैन भन्ने एउटा बलिायो डेलिबरेशन आम नागरिककाबीचमा भएको छ। त्यसले हामीलाई शिक्षा दिएको छ।
म यत्तिमात्रै सम्झिन्छु, सफोगेट्स काण्ड २०औं शताब्दिको दोस्रो दशकमा एउटा महिलाले महिलालाई मताधिकार हुनु पर्छ भनि राजाको घोडा रेसमा दौडने ठाउँमा दौडेर गइन्। लडाई संघर्ष गर्दागर्दै त्यो ठाउँबाट टुंगोमा पुग्नुपर्छ भनि थाहा थियो उनलाई ज्यान जान्छ भन्ने। तर, ज्यान गएपनि महिलाको मताधिकार स्थापित हुनु पर्छ भन्ने पाठ दिँदा उनको ज्यान गयो। घोडाले किच्चिएर मारिइन्। र दश वर्ष पनि लागेन महिलाको मताधिकार स्थापित हुन।
कमसेकम गलत बाटोमा प्रवेश गरेको सभामुख र उपसभामुखको विषयले एउटा बाटो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रक्रियाबाट फेला पार्दा नेपालको महिला आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमनागरिककाबीचमा एउटा परिवर्तन ल्याएको होला भन्ने विश्वास राख्दछु। त्यतातर्फ अब थप भनिराख्नु परेन।
सभामुख चयनका सवालमा एउटा इतिहास स्मरण गर्न चाहन्छु। सभामुख चयनको इतिहास यसकारण पनि सम्झिनु पर्छ कि पहिलो प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई सर्वसम्मत रुपमा प्रतिनिधि सभाले सभामुख चयन गरेको थियो। त्यो व्यक्तिले एउटा परम्परा स्थापित गरेर जानुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालको प्रतिनिधि सभाको पहिलो सभामुख हुनुहुन्थ्यो।
अहिले पनि हामीले दस्तावेज हेर्यौँ भने, आजका दिनमा यत्रो प्रविधिको बाबजूद पनि हामीले दस्तावेजहरु कसरी राखेका छौँ, हामीले नै सोच्नु पर्ने कुरा आउँछ।
तर, हिँजो त्यो बेला सर्वसम्मत रुपमा छान्ने परम्परा पनि स्थापित भयो र संसदको डेलिबरेशनलाई पनि त्यत्तिकै गरिमाका साथ राख्नु पर्छ भनेर त्यो व्यक्ति, त्यो सभामुखले हरेक चिजलाई अन्तिमसम्म रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्ने बाटो बनाउनु भयो। आज पनि त्यी रेकर्डहरुलाई हेर्ने हो भने, सगरमाथाको विवादमा प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाले के बोल्नु भयो? विपक्षी दलको नेताले तत्कालै के प्रश्न गर्नु भयो? अरु प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले के प्रश्न गर्नु भयो?ः अनि त्यस्ता थुप्रै थुप्रै संसद र सरकारका सम्बन्धका बारेमा एउटा राम्रो दस्तावेज बनेको छ। यीनै दस्तावेजको अध्ययन गरेर मैले मेरो सम्पादनमा संसदमा बी.पी. भन्ने पुस्तक निकालेँ। अरुहरुले पनि गर्नु भएको छ।
यो कुरा स्मरण यसकारण पनि गरेको हुँ, कि हामीले संसदको सभामुखको खोजी गर्दा सरकारको जन्म र सरकारको अवशान संसदबाट हुन्छ भनेर होइन। सभामुखको खोजीमा हामीले खोज्ने गुण सरकार संसदप्रति निरन्तर उत्तरदायी हुन्छ भन्ने हाम्रो पहिलो संसददेखि अहिलेसम्म रहेको परम्परालाई बोक्न सक्ने व्यक्ति सभामुख हुनु पर्छ भनि हामीले सुरुदेखि भन्यौँ। आज पनि हाम्रो भनाई त्यहि हो।
हामी भोलि सभामुख बन्नुहुने व्यक्तिले त्यो परम्परालाई सरकार निरन्तर रुपमा संसदकाप्रति उत्तरदायी छ। जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग त्यसैगरी हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सक्नुहोस्। सभामुख बन्ने व्यक्तिलाई हामीले त्यो शुभकामना दिन्छौँ।
तर, शुभकामना दिने बेलामा मैले दुइटा कुरालाई सम्झिन चाहन्छु। हामी यहि सभा हलमा हो, हामी बसेका थियौँ। हामीले संविधान बनाइसकेपछि पहिलो सभामुख छान्दै थियौँ। अहिले सभामुख दोस्रो पटक छान्दैछौँ तर, पहिलो प्रतिनिधि सभा हो। यो प्रतिनिधि सभासम्म हामी कसरी आइपुग्यौँ त्यो इतिहासलाई बिर्सन सकिन्न। इतिहास सम्झिने हो भने, विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकतान्त्रिक मूलधारको कुरा यहि हलमा गर्नु भएको थियो। उहाँले लोकतान्त्रिक मूलधारको कुरा गर्दा सँगै हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु हुनुहुन्छ। हस्ताक्षरसँगै बस्ने साक्षीका रुपमा त्यहाँसम्म नेताहरुलाई लिएर जाने नेताहरु पनि बस्नु भएको छ।
त्यसैले आज पनि हामी त्यो लोकतान्त्रिक मूलधार निर्माण गर्ने बाटोमा अविरल यात्रामा छौँ। त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो यात्रामा भएका नेताहरुका बारेमा जो अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग जोडिएको प्रसंग अलिकति भनौँला। तर, त्यो भन्दा पहिले, मैले यो भन्नु आवश्यक छ। कि यस सभाका सदस्य माननीय अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख चयन गरियोस् भनि प्रस्ताव राख्दा हामीसँग लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगै हिँडेका व्यक्तिहरु, हिँजो राजाको निरंकुश शासनको विरुद्ध उभिँदाखेरि अथवा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा सँग्ै हिँड्ने व्यक्तिहरु कोही कोही अदालतसम्म पुग्नु भएको छ। कोही बाहिर आफ्नो आवाजलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्नु भएको छ। हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो सभामा छौँ र सभामुख छान्दैछौँ। यो बलिदानीपूर्ण संघर्षको लामो यात्रामा हामीसँग हिँड्ने कुनैपनि साथीहरुलाई विर्सन सक्दैनौँ।
एउटा आवाज बलियोसँग आएको छ। कि भोलिको दिन विधिको शासनले चल्छ कि चल्दैन? भोलिको दिन संविधानले भनेअनुसारको बाटोमा देश हिँड्छ कि हिँड्दैन? लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्चिन्छ कि खुम्चिन्न? आशंकाहरु छन्।
त्यहि आशंकाले गर्दा होला सबैभन्दा बलियो र कडा स्वरमा हामीसँग हिँजो सँगै हिँडेका नागरिक समाजका व्यक्तिहरु, आम नागरिकहरुले एउटा शंकाको कुरा गर्नु भएको छ। त्यो बाटो पार लाग्दछ कि लाग्दैन? माननीय अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो काम पूरा गर्न सक्नु हुन्छ कि सक्नु हुन्न?
मैले यत्ति भन्नु पर्छ, माननीय अग्निप्रसाद सापकोटा अहिले सभामुखका लागि प्रस्तावित व्यक्ति हुनुहुन्छ। सभामुख भइसकेपछि एउटा ठूलो ट्रान्सफमेशन प्रारम्भ हुन्छ। जसले आज आशंका गर्नु भएको छ तिनको भरोसा जित्न सक्नु हुन्छ, सक्नुहुन्न हाम्रो चासोको विषय त्यो हो।
नेपाली कांग्रेसका प्रति उहाँहरुको एउटा भरोसाको दृष्टिकोण छ। कांग्रेसले आज यो प्रतिनिधि सभामा उभ्भिएर विपक्षको रुपमा बोल्दाखेरि पनि भन्ने हो माननीय अग्निप्रसाद सापकोटा तपाइकाबारेमा आज व्यक्त भएका आशंकाहरुलाई भोलि आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा त्यसलाई शान्त गर्दै जान सक्नुहुन्छ? त्यो तपाइको परिक्षा हो। त्यो परिक्षामा हाम्रोतर्फबाट तपाइलाई सहयोग हुन्छ।
त्यो सहयोग यसकारण कि प्रतिनिधि सभा सरकारलाई सदवै उत्तरदायी राख्ने संस्था हो। यो संस्थाको अनुहार, त्यो संस्थाको मुख सभामुखका रुपमा तपाईले काम गर्न थालेपछि हिँजोको विगतभन्दा भोलिको आगत महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यो आगतले यो कुरालाई आश्वस्त गर्न सक्नुहोस्।
आजसम्मका विवादहरु, यो बाटोमा जालाका देश भनि आजसम्म मनमा चिन्ता लिएर हिँड्नेहरु, लोकतन्त्रको बाटोमा केही कठिनाई आउला कि, संविधानको बाटोमा केही कठिनाई आउला कि? कि हिँजोका हामी दुई पक्ष आज यहाँ आइपुगेका छौँ, त्यीमध्ये एउटा वा अर्को पक्षको सोचबाट प्रतिनिधि सभा सञ्चालन होला कि भनि चिन्ता गर्नेहरुलाई आश्वस्त गर्ने काम गर्नुहोला।
त्यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो गर्नुहुन्छ वा गर्नु हुन्न हामी यहि ठाउँमा बसेर आउने दिनमा हेर्नेछौँ। गर्दासम्म हाम्रो सहयोग तपाइलाई रहन्छ। गर्न नसकेको दिनमा हामीसँग सँगै लामो लोकतान्त्रिक यात्रामा हिँडेका व्यक्तिहरु, संस्थाहरु, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबैसँग उभिन सक्नुपर्छ। त्यो उभिने हाम्रो प्रतिबद्धता कुनैपनि दिन कमजोर हुँदैन।
अब दोस्रो प्रसंग सम्झिन चाहन्छु। यहाँ आज हामीहरु आइपुगेका छौँ। हामी हाम्रो कर्तव्यप्रति सचेत छौँ। कांग्रेस आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत छ। तर, सँगसँगै १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको यो यात्रा शान्तिलाई स्थायी बनाउन चाहन्छौँ। लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउन चाहन्छौँ। संविधान चिरस्थायी बनोस्, संविधानले देखाएको बाटोबाटै यो संविधान अझ राम्रो बन्दै जाओस् तर, संविधान भन्दा बाहिरको बाटो कसैले नखोजुन्। त्यो यात्रामा छौँ हामी।
त्यो यात्रा सुरु गर्न हामी दुइटा बेग्लाबेग्लै पक्षमा छौँ। हामी सात दलमध्येको एउटा दल थियौँ, माननीय अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादी पक्षको हुनुहुन्थ्यो। हामीले संविधान सभासम्म पुग्ने कुरा गर्दाखेरि पनि जुन १२ बुँदे समझदारीको दोस्रो बुँदामा हामी संविधान सभामा पुग्छौँ, संविधान बनाउँछौँ, जनताको सार्वभौम अधिकार प्रत्याभूत हुने संविधान बनाउँछौँ। शान्तिलाई स्थायी गर्छौँ तर, संविधान सभासम्म कसरी पुग्ने भन्ने हाम्रो फरक फरक विचार भएपनि हामी त्यसमा पनि एउटै विचार बनाएर अगाडि बढ्छौँ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेबेलासम्म हाम्रा विचारहरु एक हुन पाइसकेको थिएन।
तर, त्यस पछाडिको पुनस्थापित संसदले बाटो लिँदै गयो, अन्तरिम संविधान बन्यो। संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनायो। आज हामी यहाँ आएका छौँ एउटा बाटो बनाएर आएका छौँ। त्यो जिम्मेवारीबाट कांग्रेस बाहिर निस्कँदैन।
संक्रमणकालिन न्यायका कामहरु पूरा गर्नु पर्नेछ। त्यो कामबाट कांग्रेस बाहिर निस्कँदैन। शान्तिलाई चिरस्थायी बनाउँनु छ त्यो कामबाट कांग्रेस बाहिर निस्कँदैन। त्यो काममा हामी साझा बाटोमा छौँ।
हिँजो अग्निप्रसाद सापकोटा दुइटा पक्ष हुँदा एउटा पक्षको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। आज सात दल र माओवादीका बिचमा शान्ति सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरबाट यहाँसम्म ल्याइसकेको बाटोमा एउटा मूलधार संविधानमार्फत निर्माण गरेका छौँ।
हिँजो जो जहाँ थियौँ हामी सबैले मिलेर स्थापना गरेको मूलधार हो। यो प्रतिनिधि सभामा त्यो मूलधारको अनुहार तपाई हो। सभामुख तपाई हुनुहुँदैछ। त्यसैले हिँजोको कुन पक्ष वा विगतमा कुन पक्ष होइन आगतमा सबैको अनुहार, सभाको अनुहार हुन सक्नुहोस्। यहि शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
Prevपछिल्लोअग्निप्रसाद सापकोटा नयाँ सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित
अघिल्लोसभामुखको शपथ सोमबारNext